Si fudud oo - Lacag lagu diri karo ehelkaaga | Malawi | Transfer Galaxy
Markaad sii wado isticmaalka boggayaga, waxaad ku raacsan tahay siyaasaddayada cookie-ga si aad u taageerto khibradaada.
Sidey u shaqayso
U dir lacag Malawi
Gaar meel dhaafsan xuduuddaha oo u dir lacag dadka aad jeceshahay. Moobilka gacanta Malawi si fudud, oo degdeg ah & ammaan ah.
Waxaan ka dirayaa
Austria Belgium Cyprus Denmark Estonia Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Norway Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom
U dirayaa qof qaali ah ee jooga
Dooro wadan Afghanistan Bangladesh Djibouti Egypt Ethiopia Gambia Ghana India Iraq Jordan Kenya Kurdistan Kuwait Lebanon Madagascar Malawi Malaysia Morocco Oman Palestine Philippines Qatar Rwanda Saudi Arabia Senegal Somalia Somaliland South Africa Thailand Tunisia Turkey Uganda United Arab Emirates Vietnam Yemen
Eeg meelaha laga heli karo
Nambarka teleefonka gacanta
Ku celi numbarka gacanta
Nambarka teleefonka ismaleh
Waxaad si dagdag ah lacag ugu diri kartaa Airtel Money Mobile , Chitipa ilaa Nsanje.
Fadlan hubi qofka ku kaydsan inuu haysto Airtel Money akoon.
Ku dir lacag ilbiriqsiyo
U dir adeega taleefanka gacanta ama ka qaado lacagtada 25 + wadan adigoo samaynaya talaabooyin yar.
Dir wakhtigaad doonto. Dirista badankeed waxaa ay ku gaarta qofka ilbiriqsiyo gudahood.
Kumi kasta oo la keydiyo waa kumi dheeraad u ah qofka aad jeceshahay.
Ka dir meel kasta oo aad joogtid - looma baahna inaad booqato wakiil.
Halkan ammaan ayaad ku tahay
Waxaa na kormeera Hay'adda Kormeerida Maaliyadeed ee Iswidhan (Inst. No 45583)
Xogtaada iyo xawaaladaada waa sir oo si qarsoodi ayaa loo hayaa
Si fudud ula soco - mar walba waad ogtahay halka ay lacagtaadu marayso
Waxaan la wada-shaqeenaa bangiyada adduunka hogaamiya iyo bixiyayaasha lacag bixinta, sidaa darteed lacagtaada waxay tagi meel aamin ah mar walba
Awoodsiinta dadka iyadoon loo eegin xuduudaha
In ka badan 1 bilyan ee SEK ayaa loo diray saaxiibbada iyo qoysaska adduunka oo dhan. Tani waa in ka badan nus milyan falal ah daryeelid.
Waxaa jira dad badan oo anaga ah
Waxaan u qaadnaa ayeeyda dhakhtarka marka ay jirato. Waxaan saaxiibka ka caawinaa arooskiisa ama walaasheen waxyaalaha aan la fileynin. Si wada jir ah ayaan u sameyneynaa isbeddel. kuwaani waa sheekooyinka aan wadaagnay.
"Waxaan isku dayaa in aan walaalkey ku caawiyo lacag ka caawisa waxbarashadiisa. Isaga ayaa noogu caqli badan, waana ogahay haddii fursad la siiyo inuu waxyaalo cajiib ah sameyn doono.”
Shoaib wuxuu lacag u diray Afghanstan
"Kala iibsiga Galaxy wuxuu iga caawinayaa inaan la xiriiro adduunka wuxuuna iga caawiyaa inaan caawiyo kuwa baahan. Waxay ila tahay wax fiican inaan dib u bixiyo, anigoo og in taageeradeyda ay gaari doonto kuwa ugu baahida badan."
Maryan waxay lacag u dirtay Somalia
"Waxaa jirta gabar aan abti u ahay oo jecel inay waxsawirto, waxay wax sawirtaa saacado iyadoon joogin. Waxaan rabaa inay hesho waxa u baahan tahay, marka waxaan u diraa walaashay lacag markii aan awoodo.”
Suleiman wuxuu lacag u diray Djibouti
Diyaar ma u tahay inaad bilawdid?
Dirida ugu horeysa waa lacag la'aan
I tus sida ay u shaqeyso >
Dir Lacag xili kasta
Dhib male halkaad ku sugan tahay, app-kayaga lagu isticmaalo taleefanka ayaa kuu ogolaanaya in aad dirto lacag waqti kasta.
Dooro luuqada aad rabtid
Sidaada oo kale, waxaan taageeraynaa dadka aan jecelnahay ee dalkii jooga. Nagu soo biir fidinta gaaritaanka farsado waxtar ah.
Sida ay u shaqeyso
Jawaab celin iyo cabasho
Nagu soo xero
© 2020 Transfer Galaxy AB – Transfer Galaxy AB, Reg. No. 556978-4464, waxay ogolaasho ka haysata hay’ada kormeerka lacagaha Finansinspektionen, iyadoo leh lambar aqoonsiga 45583. Domicile: Örebro, Sweden.